1954-1964 Evinrude 5.5 HP Tune-UP Ignition System Project Tune-Up | Outboard Boat Motor Repair
1954-1964 Evinrude 5.5 HP Tune-UP Ignition System Project Tune-Up
Afa-tsy ireo plug-pire sy tariby plug-n'ny rehetra dia miorina eo ambanin'ilay flywheel avokoa ny rafi-dorana. Ny karazana magneto ignition izany maotera no Flywheel Magneto amin'ny mpandika Points. OMC nampiasa izany Universal Magneto amin'ny ankabeazan'ny boaty kely an-dry zareo hatramin'ny taona 50 ka hatramin'ny vao manomboka ny fanapoahana elektronika. Ny asan'ny ignition rafitra dia ny hiteraka ampy Zintin'aratra (Manodidina 20,000 volts) mba hitsambikina ny gap ny kilalaon'afo plugs, famoronana ny kilalaon'afo, ary mampirehitra ny solika / rivotra fifangaroana, ary mba hahazoana antoka fa malefaka Fa raha atolotra ny pitik'afo plug amin'ny tena mety tsara ny fotoana.
Esory ny Flywheel-bazana - Vahao ny voanjo manidina. Ampiasao ny socket 3/4 inch na wrench hafa, mamaha ny voanjo manidina. Mila zavatra hitazonana ny fijanonana flywheel ianao mba hahafahanao manisy torque amin'ny voanjo raha mitazona ilay flywheel mba tsy hiverenany miaraka amin'ny voanjo. Misy fitaovana manokana ho an'ity fa nampiasa a andilany Wrench izay nomen'ny olona ahy ho an'ny Noely taona vitsivitsy lasa izay. Novakiako izay indraindray hametrahan'ny olona sombin-tadim-pohy amin'ny lavaka fantsom-bovo mba hijanonan'ny piston alohan'ny hahatongavany amin'ny Top Dead Center, noho izany, mitazona ny flywheel mba hahafahanao manala ny voanjo. Mino aho fa mety hanimba ny motera ao anatiny izany amin'ny alàlan'ny fanerena be loatra an'ireo tsorakazo mampifandray. Ary koa, efa novakiako tamin'ny tabilao fifanakalozan-kevitra fa mety ho tapaka ny tady ka mamela tady iray ao anaty varingarina
Avelao Flywheel-bazana ampahany On
.Esory ny Flywheel - Misy fomba roa hanesorana ilay flywheel, miankina amin'ny fitaovana anananao. Ny ankamaroan'ny mekanika dia hampirisika anao hampiasa a pikolokolo. Afaka manofa familiana no mpanala avy amin'ny fitaovana ao an-toerana fanofana fivarotana, na afaka mividy Harmonic balancer. Ny fampiasana mpantsaka no fomba azo antoka indrindra hisorohana ny fandohalihana na ny fanaovan-tsampona ny flywheel. Ianao dia mila mpantsarika izay miraikitra amin'ireo loaka telo ao anaty lalitra mba hanesorana azy. Aza mampiasa mpantsarika misintona amin'ny sisin'ny flywheel.
Peho ny Flywheel sy Lift Cover
Asandrato Flywheel Cover
Ataovy Flywheel-bazana indray Crankshaft
Ny iray hafa, fomba tsara kokoa an-tsaha hisintonana ny flywheel dia ny famaha fotsiny ny voanjo manidina mankany amin'ny toerana somary ambonin'ilay crankshaft. Miaraka amin'ny visy boribory lehibe sy marmara malefaka, kely paompy midina amin'ny voanjo manidina raha mibontsina ambony amin'ny sisin'ny lohan-tsofina miaraka amin'ny visy. Hamarino tsara fa manidina ambony amin'ny flywheel ianao amin'ny alalàn'ny fahazoana antoka fa io no ampahany mihodina fa tsy ampahany mijanona. Ahodino ilay flywheel 1/4 ary ahodiho indray ary avereno mandra-pialan'ny flywheel. Tokony hivaha ilay flywheel aorian'ny paompy vitsivitsy ary azo esorina avy eo amin'ny crankshaft aorian'ny fanesorana ny voanjo manidina. Ny atahorana amin'ity fomba ity dia raha manendry mafy ny marotoa ianao dia azonao vonoina ny crankshaft.
Soloy Ignition Parts
Ny faritra ignition miorina ambanin'ny flywheel izay ahitana hevitra, condensers, ary coils, roa ny tsirairay satria misy varingarina roa. Rehefa mandeha ny fotoana dia miharatsy ireo singa ireo ary mila soloina. Azonao atao ny mahita amin'ny sary etsy ambany fa vaky tanteraka ny epoxy manarona ny familiana ny coil. Ity dia olana iraisan'ny motera OMC taloha. Raha tsy misy fanoloana, ny hamandoana rehetra manodidina ny motera dia hahatonga ny coil ho fohy na hivezivezy eo amboniny ka hahatonga ny anjelinao tsy hahazo tsipika tsara mba hampandehanana tsara ny motera, indrindra amin'ny hafainganam-pandeha. Angamba 9 amin'ny 10 amin'ireo motera misy ankehitriny dia misy coil mitovy amin'ny aseho etsy ambany. Ny coil vaovao dia ambony noho ny OEM tany am-boalohany satria manana tombo-kase epoxy hafa izay tsy hanana an'io olana io. Ilay vaovao hevitra, condensers, ary coils dia tsara kalitao lavitra ary manao an'izay tena izy. Ireo faritra dia misy betsaka ary tsy dia lafo.
Ilaina Ignition Parts
Esory ny Old Coils - Ny coil tsirairay dia mitazona amin'ny toerany amin'ny phillips iray sy volo roa mahitsy. Ataovy azo antoka ny fampiasana ireo visy kely habe amin'ireto visy ireto mba tsy ho simba izy ireo. Vantany vao esorina ireo visy, esory ny tariby maintso sy mainty ary esory ny tariby misy tsipika.
Old vaky Coils
Old Coils Nianjera teo Am-Ankoatra
Ireo antitra coils nianjera tanteraka masina mandritra ny fanesorana dingana.
Esory ny taloha sy ny Condensers Points - Esory ny retainer horonantsary tao an-tampon-davarangany lahatsoratra. Raha vao esorina le clip, dia afaka manala ny moveable antsasaky ny isa amin'ny misintona azy, ary eny amin'ny lahatsoratra davarangany.
Point mpandika Retainer Clip
Esory Condenser sy Points
Ignition Parts nesorina
Avy eo, dia hanala ny tsy moveable ny antsasaky ny hevitra. Aza esorina ny visy fanitsiana. Ny visy fanitsiana dia tsy mampifandray ireo teboka amin'ny takelaka stator ary tsy tokony hesorina. Ny visy fanitsiana dia ny visy izay kely kokoa sy lavitra indrindra avy amin'ny crankshaft ary tafiditra ao anaty elongated slot ao amin'ireo teboka. Esory ny visy izay mitazona ny fototry ny isa. Ity ilay visy izay eo akaikin'ny crankshaft no misy azy. Esory ary esory ny coil sy ny tariby condenser izay miraikitra amin'ireo teboka. Azonao atao ihany koa ny manala ilay condenser.
Esory sy ny tsy madio ny Stator Base - Ampiasao ny mpanadio carburetor, atsipazo ny fototr'ilay stator ary kosohy madio amin'ny lamba. Raha nanery rivotra ianao, dia atsofohy ny mpanadio vovoka sy carburetor sisa tavela.
Elektrônika Timing Advance
Stator Base nesorina
Koa satria efa ny coils, hevitra, ary ny condensers dia nifindra ka ny stator nanadio ny faladiany, ianao vonona ny manambatra ny rafitra ignition amin'ny faritra vaovao.
Jereo Spark plug tariby sy Manolo raha ilaina - Na dia tsy manana ny toeran'ny stator aza ianao, dia fotoana mety izao hijerena ny tariby tsipika misy anao na oviana na oviana na akanjo na harafesina. Raha ny amiko dia voahitsakitsaka ny faran'ny tariby plugiko ka nahatsapa aho fa fotoana tsara hanoloana ny tariby vy. Taorian'ny fivarotana be dia be dia hitako fa ny tariby plug-nire 22-inch generic amidy ao amin'ny NAPA dia tsy ampy. Nandeha tany amin'ny toerana antsoina hoe Tractor Supply aho ary nividy tariby tariby 4 tany ho any amin'ny $ 10. Mariho fa misy ny tsy fitovizan'ny tariby "core solid" taloha izay ampiasaina amin'ny fiara antitra sy motera sambo sy ny tariby «carbon core» vaovao ampiasaina amin'ny fiara ankehitriny izay mampihena ny entona elektronika izay miteraka fanelingelenana amin'ny radio sy ny toy izany. Tena mila mampiasa tariby fototra amin'ny motera ianao. Ny fampiasana ny tariby taloha dia toy ny lamina ary mamela ny santimetatra fanampiny halavako, notapahiko ny halavany tariby vaovao ary natodiko manodidina ilay lalana teo ambanin'ny lozan'ny stator ihany izy ireo. Tsy haiko hoe inona no fitsipika manolo ny tariby plug-in fa 50 taona mahery no hitako fa mila soloina! Nolazaina tamiko fa ny ankamaroan'ny toerana fanamboaran-tsambo sy mpamono bozaka dia manana karazana tariby fototra amin'ny horonan-taratasy lehibe ary afaka manapaka ny halavany ilainao, mitafy satroka baoty ary azoko antoka fa handeha tsara izy ireo.
Hametraka, Set, ka Fantaro raha avy amin'ny New Points - Raha tianao handeha tsara ny moto dia tsy maintsy apetraka, apetraka ary hosedraina ny môtô mba hahazoana antoka fa misokatra sy mikatona amin'ny fotoana tena izy izy ireo. Io no mamaritra hoe rahoviana no hirehitra ny plug-nao, ka miala ny fandoroana ao anaty vilaninao. Ho azonao atao ny milaza marina hoe oviana no napetraka tsara ireo hevitrao amin'ny alàlan'ny fitsapana azy ireo miaraka amina fitiliana fitsapana roa sy metatra ohm.
Point mpandika Test Leade
Fahano Test Leade alalan'ny Stator Base
Fahano ny faran'ny fitsapana iray izay mitarika hatrany amin'ny faran'ny stator base eo akaikin'ny iray amin'ireo tariby fantsonao Hampiasaina hizaha toetra izany ary hesorina aorian'ny fanitsiana sy fanandramana ireo teboka. Fahano ny faran'ny fitsapana iray izay mitarika hatrany amin'ny faran'ny stator base eo akaikin'ny iray amin'ireo tariby plug-nao. Hampiasaina hizaha toetra izany ary hesorina aorian'ny fanitsiana sy fanandramana ireo teboka.
Point mpandika Base
Point mpandika davarangany
Sokiro Down mpandika Point Base
Lubricate ireo poste rocker roa miaraka amin'ny menaka omena ao anaty kitanao fanamafisam-peo. Aza hadino ny mametraka palitao manify fotsiny amin'ireo paingotra rocker. Afangaroy ny cam amin'ny alàlan'ny fametahana diloilo kely omena ireo teboka eo amin'ny rantsan-tananao ary manosotra fonosana kely amin'ny cam rehefa mihodina ny crankshaft ianao. Fomba iray mora hanodinana ny crankshaft amin'ity motera ity ny fanatsoahana tanana iray fotsiny ary hampiodinana ny propeller. Apetraho eo amin'ny tohatry ny armature ny lafiny tsy azo ovaina amin'ny sisin-doha amin'ny alàlan'ny fametrahana azy eo ambonin'ny visy fanitsiana ary apetraho amin'ny toerany mba hahafahanao mametraka ny visy mitaingina. Apetraho ny visy fametahana sy ny mpanasa lamba. Apetraho ny lafiny azo ovaina amin'ireo teboka vaovao napetraka eo ambonin'ny paositra ary potsiho ny toerana misy azy. Mila mametaka ny lohataona ianao mba hiditra ao anaty metaly fisaka. Apetraho eo amin'ny paosin'ny pivot ilay clip mitahiry azy ary manorata izany mba hialana amin'ny crankshaft. Apetraho eo ambonin'ny lohataona sy ilay metaly fisaka mitazona ny fihenjanana amin'ny lohataona ny rakitsary mitazona lohataona. Hamarino tsara fa ny volom-borona eo ambanin'ity clip ity dia tendro manondro ny sandry tapaka mba tsy hanelingelina ny fanokafana ireo teboka.
Menaka Crankshaft Cam amin'ny Molly
Ignition mpandika Point Cam Top fametrahana
Point mpandika Spring Retainer Clip
Ahodino ny crankshaft mba ho eo amin'ny tendron'ny kamisy ny sakana fikosehana. Ny teboka avo amin'ny kamisy dia misy soratra hoe "TOP" voahidy amin'ny toerana avo. Ampiasao ny refy tsapa, ampifanaraho amin'ny .020 santimetatra ny elanelana amin'ny alàlan'ny famadihana ny visy fanitsiana. Ny tsindrin-tsiranoka gage .020 dia tokony ho afaka mifanentana eo anelanelan'ny teboka roa. Tsy ilaina ny mandany fotoana be loatra hahazoana 020 banga marina. Ity elanelana .020 ity dia teboka fanombohana fotsiny hanitsiana azy araka ny ahitanao ny fomba etsy ambany. Atsipazo ny faran'ny andrana fitadiavanao mankany amin'ilay toerana anaovan'ny coil sy ny tariby condenser amin'ny teboka.
Miverena Crankshaft Cam ho High Point
Clip Test hitarika ho amin'ny Ignition mpandika Point
Fomba tsotra nefa mahomby amin'ny fanandramana ny fandaharam-potoana: Raha tsy manana jiro strobo ianao na mpandinika mpandrehitra lafo vidy hijerena ireo teboka fanapahana anao dia tsy ilaina ny mivoaka haingana mankany amin'ny fivarotana ary mividy iray. Ny hany ilainao hizaha toetra ny vanim-potoanan'ny afo dia ny fitiliana andrana aligatera roa sy ny metatra ohm mahazatra hijerena ny fitohizany. Tsy ilaina ny mampiasa mpanadihady fandrehitra satria vaovao daholo ny faritra fandrehanao. Ity fomba ity dia hahafahanao manamboatra ny fotoana fandrehanao araka ny marina araka izay azonao atao amin'ny fitaovana fitiliana lafo kokoa. Ny fotoana fandrefesana dia ny fahazoana antoka fa manokatra sy mihidy amin'ny fotoana mety ireo teboka fanapahana anao. Ireo torolàlana voahidy eo an-tampon'ny flywheel sy ny boky torolàlana momba ny serivisy dia milaza fotsiny fa manafoana ny tebokao mankany .030 santimetatra. Ity dia fanakaikezana fotsiny ary mety hiteraka ny fotoana fandrehanao ho marina na tsia. Raha hampiasa ny fomba voalaza etsy ambany ianao, dia ho marina ny fotoananao ary ny vokany dia hihazakazaka moramora kokoa ny motera anao ary hanomboka mora kokoa.
Esory ny voanjo manidina ary soloina vetivety ilay flywheel eo amin'ilay crankshaft. Hamarino tsara fa ny slot eo afovoan'ny flywheel dia mifanentana amin'ny lakilen'ny flywheel ary mihidy tsara amin'ny toerany ilay flywheel. Soloy ny voanjo manidina nefa tsy tery. Ny flywheel dia manana ny fiandrasana fotoana amin'ny fotony. Misy ny notch roa amin'ny lafiny mifanohitra amin'ny flywheel, iray isaky ny isa isa. Ny marika lehibe kokoa dia ho an'ny varingarina laharana voalohany ary ny fihenam-bidy kely kokoa amin'ny lafiny mifanohitra dia ho an'ny varingarina faharoa. Makà penina marika Sharpie ary asongadino ireo marika ireo mba hahitana azy ireo mora foana.
Test fotoana Bad
Ampifandraiso ny faran'ny malalaka amin'ny fitiliana anao amin'ny iray amin'ireo fitarika amin'ny metatra ohm anao. Ampifandraiso amin'ny tany fitarihana hafa ny ohmmetero miaraka amina fitarihana fitiliana hafa. Rehefa mihodina ny fizaran-tananao ianao dia tadiavo ny marika ara-potoana rehefa manakaiky ireo marika roa amin'ny fotony izy. Ny marika eo amin'ny flywheel dia tokony hifindra avy eo ankavanana miankavia rehefa mihodina ilay flywheel ianao. Rehefa eo anelanelan'ny marika roa amin'ny takelaka armature ny marika ara-potoana eo amin'ny flywheel dia tokony hisokatra ny teboka ary hiova ny ohm metatra dia 0 ka hatramin'ny ohm tsy manam-petra. Amin'ity karazana fanapoahana magneto ity dia hirehitra ny bara raha misokatra ireo teboka.
Raha kely loatra ny banga amin'ireo teboka dia hisokatra tara ireo teboka na aorian'ny handalovan'ny marika ara-potoana ireo marika eo amin'ny fotony. Raha malalaka loatra ny elanelana amin'ireo teboka, dia hisokatra aloha ireo teboka na alohan'ny hahatongavan'ny mariky ny fotoana amin'ireo marika eo amin'ny fotony. Ity motera ity dia misy fonony vy kely eo an-tampon'ny flywheel ahafahanao manala sy miditra amin'ireo visy fanitsiana banga mba hanokafana na hanidiana ny banga amin'ireo teboka. Manaova fanitsiana kely amin'ny visy fanitsiana banga mandra-pahatonganao ny teboka hisokatra rehefa eo anelanelan'ny marika roa eo amin'ny fototr'asan'ny armature ny marika ara-potoana.
Apetraho, apetraho, ary andramo ireo teboka faharoa, afa-tsy amin'ity indray mitoraka ity dia hampiasa ny marika famantaranandro kely kokoa ianao amin'ny lafiny mifanentana amin'ny flywheel. Azonao atao koa ny mandingana ny lubrication an'ny cam sy rocker post izay nataonao tamin'ny setrin'ny teboka voalohany.
Hizaha toetra ny New Coils - Aza mieritreritra hoe tsara ny coil vaovao novidinao. Mampiasa Ohmmeter na a Diode fitohizan'ny Checker andrana ny fitohizan'ny fihodinan'ny voalohany ny coil. Tokony hisy fitohizan'ny Green ary Black Leads. Tokony hisy ny fanoherana .9 ohm eo anelanelan'ny Green ary Black mitarika.
Jereo Ignition Coil Primary Windings
Jereo Ignition Coil Faharoa Windings
Hametraka New Coils ary Condensers
Ataovy kely ny silicone iombonana amin'ny lavaka ho an'ny pitik'afo plug connector. Tsy ny karazana silicone izay ampiasainao mba asio tombo-kase ny koveta be fandroana. Io karazana silicone sealer tsy manamafy. Tsy mba manompo ny hamandoana avy amin'ny herinaratra fifandraisana. Azonao atao ny mividy izany silicone sealer na oviana na Radio trano bozaka na fivarotana elektronika. Solafaka ny pitik'afo plug kiraro tariby tao ny kilalaon'afo plug tariby.
Ataovy Silicone amin'ny Coil, ary kilalaon'afo plug Connectors
Toerana coil vaovao teo armature fipetrahany izy.
Sokiro coils vaovao tao armature fipetrahany izy.
Ny tariby spark dia mifamatotra amin'ny coil amin'ny alàlan'ny fametahana azy amin'ny pin misy kofehy. Mety mila mamaha ny visy mitazona ny tariby ianao mba hanananao malemilemy ampy hametahana azy ireo ao amin'ilay mpampitohy. Ahidiho ao anaty mpampifandray azy ny plug ary apetaho eo ambonin'ilay mpampitohy ny boot. Tokony hanome tombo-kase tsara ho an'ity fifandraisana ity izany. Ahodino eo amin'ny toerany ny coil, ampifanaraho amin'ny lavaka visy. Hamafiso ny visy mitazona ny tariby vy any amin'ny ilany ambany amin'ny lovia fiadiana.
Ny tariby maintin'ny coil dia miforitra amin'ny alàlan'ny fampifandraisana azy amin'ny visy amin'ny roil coil izay lavitra indrindra amin'ireo teboka. Ireo sary etsy ambony dia mampiseho ny fomba tsy mety sy tsara hanodinana ity tariby mihodina coil ity. Ianao dia te-hahazo antoka fa ny tariby rehetra dia nakambana tsara mba tsy hikasika faritra mihetsika izy ireo. Raha ity coil ity dia natsofoko tao ambadiky ny visy fametahana lohan'i Phillips ny tariby mainty. Ary koa, tianao ho azo antoka fa tsy misy tariby voafintina ary somary mitaredretra izy ireo mba tsy hanome adin-tsaina an'ireo mpampifandray azy ireo.
Position coil mba tsy hanitatra lasa fipetrahany izy.
Alohan'ny hanamafisanao ny visy fametahana dia alao antoka fa tsy manitatra ny sisin-dambam-bolongana eo am-pototry ny fitaovam-piadiana ny andriamby. Raha napetraka ny coil ka manitatra mihoatra an'io fotony io ny andriamby, dia hikasika ny velaran'ny atin'ny flywheel ny andriamby.
Connect tariby ny mpandika hevitra.
Position vaovao armature condenser amin'ny fipetrahany izy.
Sokiro coil sy ny condenser tariby ny mpandika hevitra.
Ampifandraiso moramora ny tariby coil maitso ary koa ny tariby condenser mainty amin'ireo teboka. Apetaho amin'ny fotony ny condenser miaraka amina visy. Hamafiso ny visy mitazona condenser sy tariby coil. Tandremo sao manenjana loatra ity visy ity na manindry ny teboka satria mety hanakorontana ny isa namboarinao izany.
New magnedo ignition rafitra.
Ny vita Ignition System dia tokony hijery toy izany.
Hanenjanana kokoa Flywheel-bazana
Soloy ny flywheel sy snugly mafy ny flywheel-bazana. Raha manana Torque wrench, Torque ny flywheel-bazana ny momba 45 tongotra kilao.
Jereo for Spark - Esory ny toetra taloha plugs kilalaon'afo. Mampiasa roa ny fanjaitra-orona no pliers, handamina ny faran'ny kilalaon'afo taloha plugs ary miverina ny antitra plugs ny tariby. Raha mitana ny pototry ny kilalaon'afo taloha plugs ny tany, manaraka ny fihodin'ny famantaranandro hanodinana ny flywheel na amin'ny tanana na amin'ny alalan'ny fitodihana amin'ny flywheel-bazana amin'ny wrench. Tokony hahita ny salama kilalaon'afo mitsambikina ny banga ny plugs taloha.
Jereo for Spark
Hantsana ary Hametraka New Spark Plugs - Mampiasa ny feeler habetsahan'ny, manitsy ny hantsana ny kilalaon'afo vaovao plugs ny .030 santimetatra. Plugs vaovao dia tsy hivoaka avy amin'ny boaty ny marina hantsana sy ny hantsana ny plugs dia fomba tsotra izay matetika odian-tsy hita. Raha toa ka tsy manana fitaovana manokana ho fanitsiana ny pitik'afo plug banga, dia afaka mampiasa ny antsy hareza mba hanitatra ny elanelana na kely paompy ny faran'ny plug amin-javatra sarotra ny hanidy ny banga. Mametraka ny kilalaon'afo vaovao plugs sy ny rafitra ignition dia miala-up.